Fividianan ny Agent, Agence amin'ny fandefasana, serivisy manokana - Yunis
Manana mpamatsy orinasa maharitra sy maharitra izahay amin'ny fivarotana orinasa an'arivony sy tranombarotra an'arivony hiantohana ny fanomezana entana voafidy ara-potoana sy kalitao.
Miaraka amin'ny 10 taona mahery ao amin'ny orinasam-pifandraisana dia nanangana fifandraisana akaiky izahay miaraka amin'ireo mpamatsy tsara indrindra any China. Afaka manome anao vidiny mifaninana indrindra amin'ny tsena izahay, miaraka amin'ny kalitao tsara indrindra.
Hanome anao serivisy manokana manokana sy tokana mifanentana amin'ny filanao izahay ary hahita vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takinao ary mahomby.
Raha mitady mpandraharaha matihanina hanatanteraka ny orinasanao vaovao ianao ary hamorona sehatra fitomboana vaovao sy mavitrika ho an'ny marika, hamboarinay ny vahaolana mety aminao.
Afaka manao mihoatra noho izay eritreretinao ianao, tsy hanenenanao intsony ny safidinao
Navoakan'ny Jobber ny tatitra manome fanazavana ...
TORONTO- (BUSINESS WIRE) –Jobber, mpanome tolotra fitantanana ny serivisialy momba ny serivisy an-trano dia nanambara ny valiny avy amin'ny tatitra farany nataony nifantoka tamin'ny fiantraikan'ny COVID-19 momba ny fiantraikan'ny toekarena ao amin'ny sokajy Home Service. Utili ...
Mifanentana amin'ny varotra amin'ity ririnina ity
Tsy misy na inona na inona tahaka ny fikosoham-bary eo akaikin'ny afo mirehareha nofonosina amin'ny mafana mafana, bodofotsy malefaka ary ondana volom-borona amin'ny andro mangatsiaka. Rehefa mamory ny ambiny amin'ny vanin-taona ririnina isika dia afaka misaotra amin'ny tontolo ...
Fandinihana ny tsena amin'ny varotra maneran-tany 2020 hatramin'ny ...
Ny tatitra momba ny tsenan'ny varotra Global Trade dia manolotra famakafakana feno sy marani-tsaina momba ny fifaninanana, fizarazarana, dinamika, ary fandrosoana ara-jeografika miaraka amin'ny vinavinan'ny indostria ho avy amin'ny 2026. Ny fikarohana fikarohana dia n ...
Yunis International Trade (HK) Co, Ltd dia naorina tamin'ny taona 2011. Izy io dia orinasa manana zon'ny entana manafatra sy manondrana izay notohanan'ny Fitantanana ny raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa ara-toekarena ary ny fitantanana ankapobeny. Ny orinasa dia manana fototra ara-toekarena mafy orina, tambajotra fifandraisana matanjaka ary mpiasa iray feno. Miaraka amin'ny fidiran'i Shina amin'ny WTO dia mitombo ny varotra manafatra sy manondrana. Mba hahafahana mameno bebe kokoa ny filan'ny mpivarotra sy mpanondrana sy mpanondrana…